ဒီတစ်ခါတော့ အုန်းသီး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ဒီတစ်ခါတော့ အုန်းသီး
Posted by လင်းဝေ on Nov 25, 2010 in News | 17 comments
မနေ့က ငှက်ပျောသီး အကြောင်းရေးမိလိုက်လို့ထင်ပါရဲ့။ ဒီနေ့ အုန်းသီးအကြောင်း သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် က ပို့လိုက်တယ်။
သူ့မေးလ်ထဲကဟာကို နည်းနည်းပြုပြင်ပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကမ္ဘာကြီးမှာ ငှက်ပျောသီးစားပြီး အုန်းရည်သာသောက်နေလို့ရတော့မယ်ထင်ပါရဲ့။ ကမ္ဘာပျက်ကိန်းနီးလာလို့ကြောက်နေသူများ အသက်ရှင်ကျန်ခဲ့တဲ့အခါ ဘာမှာ စားစရာ သောက်စရာမရှိရင် စားဖို့သောက်ဖို့ ကြိုတင် သင်ကြားပေးထားတယ်မှတ်ပါ။
မြန်မာပြည်လို အရှေ့တောင်အာရှက တိုင်းပြည်မှာနေတဲ့သူတိုင်းလိုလို အုန်းသီးစိမ်းထဲက အုန်းရည်ကို သောက်ခဲ့ဖူးမယ် ထင်ပါတယ်။ ချိုမြမြ အီတီတီ ဖန်တွတွ အရသာ ရှိတယ်တဲ့ အုန်းရည်ကို လူတိုင်းက သိကြပေမဲ့ အုန်းရည်ရဲ့ အသုံးဝင်ပုံ လျှို့ဝှက်ချက်လေးကိုတော့ သိသူနည်းပါတယ်။ အုန်းသီးတစ်လုံးထဲက သဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အုန်းရည်အကြောင်းနဲ့အတူ အုန်းသီးရဲ့ အသုံးဝင်ပုံလေးကို ဖတ်မိထားသလောက် ပြန်လည် ဝေမျှပါဦးမယ်။
ကျန်းမာရေးအတွက် အုန်းရည်များများသောက်ပြီး အုန်းဆီ များများလိမ်းလို့ အုန်းနို့ကိုတော့ သင့်တင့်ရုံသာ စားကြပါစို့
အုန်းရေ ကို ငယ်ငယ်က ကြိုက်လို့.. ဦးပလာတာ ရောင်းတဲ့ အုန်းရေ တခွက် ၁ကျပ်နဲ့ သွားဝယ်သောက်တယ်။
အုန်းနုနု အရည်ညှစ်ရင် အပြာရောင်သန်းတတ်သည်။
အုန်းကြီး များများ စာ အပူကန်၏
အုန်းသီး များများ စားမိပါက သွေးတိုးတတ်၏
လော့စ်အိန်ဂျလိစ်ရဲ့ .. တရုတ်စူပါမားကက်တွေမှာ ..အုန်းသီနုနု .. အလုံးအတိုင်း(အခွံမာနွှာထားပြီး)ရောင်တယ်..။
အဲဒါ.. ထိပ်က အပေါက်နေရာကို .. အချွန်(တူ)နဲ့ထိုးပြီး ..ပိုက်တံသွင်း..စုပ်သောက်ကြတာပဲ..။
အားတိုင်းယားတိုင်းသောက်ကြတာမို့ .. တော်တော်ရောင်းရပုံပေါက်ပါတယ်..။
ကျုပ်ကတော့ .. တခါက ..ချောင်းဆိုးတာ တလလောက်အမြစ်မပြတ်ပဲဖြစ်နေတာမို့ ..
အင်္ဂလိပ်ဆေးလဲကုန်..။ ကွမ်းရွက်ပုံဆေးလဲမတိုးဖြစ်နေတာ…တရက်အုန်းရေ ၄-၅လုံးချလိုက်တာ ..၃-၄ရက်နဲ့..ပျောက်သွားပါတယ်..။
ဦးလေးခိုင် ချောင်းဆိုးတုန်း အုန်းရေသောက်တာ.. ဘယ်အချိန်လဲ.. အေးတဲ့ အချိန်မှာ ဆိုးတဲ့ ချောင်းလား.. ပူတဲ့ အချိန်မှာ ဆိုးတဲ့ ချောင်းလား။
ူအယ်လ်အေရဲ့ … ဇူလိုင်ဆိုတော့ … ပူတဲ့အချိန်ပေါ့..။
လက်စသတ်တော့ ဆူးကလဲ ဗိန္ဓော ကျွမ်းတာပဲကိုး…
ငှက်ပျောသီးဖတ်ရတော့ ပျော်တယ် စားလို့ရသကိုး။
အနော်ရထာမင်း အာဏာတည်မြဲရေးအတွက် နိုင်ငံရေးကစားသွားတာတွေလို့ ဖတ်ဖူးပါတယ်။
သူသတ်ချင်တဲ့သူသတ်ပစ်ပြီး .. လူတွေမကြေမနပ်ဆူပူမှာစိုးလို့ နတ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး နတ်ကွန်းနေရာပေးလို့ လူတွေအာရုံလွဲခဲ့တာပါတဲ့..။
ယစ်ပူဇော်တဲ့နေရာ အကုန်အကျနည်းအောင် အဲဒီခေတ်ကပေါတဲ့ ငှက်ပျောသီး၊အုန်းသီး နဲ့နတ်ကိုးခိုင်းတာလို့ ဖတ်ဖူးပါတယ်.။
ဒီခေတ်.. အာဏာပိုင်တွေက .. ငှက်ပျောသီးတလုံး၊ အုန်းသီးခွံတခုနဲ့သာ နတ်ကိုးကြဖို့ရာ အမိန့်ပြန်တမ်းထုတ်ဖို့ကောင်းတယ်ထင်မိပါတယ်.။
အဲဒီကထွက်လာမဲ့ငွေ .. ဒေါ်လာမီလီယံပေါင်းများစွာတွေကို မြန်မာကလေးတွေဆေးကုစရိတ်အတွက် ရံပုံငွေထောင်ပြီး trust fund အဖြစ်ထည့်လိုက်ရင် အနာဂတ် သာယာကောင်းမွန်တဲ့ တိုင်းပြည်ဖြစ်လာမှာပဲ..။
အပူနာ အအေးနာခွဲနိုင်ပြီ ဆိုတော့
အုန်းသီး နတ်တင်တယ် ဆိုလို့.. အိမ်က အတွေ့အကြုံလေး ပြောအုန်းမှ..
အိမ်မှာ နတ် ဆို ဘာ နတ်မှ အဖေက လက်မခံဘူး.. အဘွားက နတ်ယုံတယ်။ အဖေ ခရီးထွက်တုန်း အဘွားက အမေကို အုန်းသီး အတင်းချိတ်ခိုင်းတာနဲ့ ချိတ်လိုက်တာ. အိမ်မှာ ချိတ်ပြီးသား ဖြစ်နေလို့.. အဖေလည်း ဘာမှ မပြောဘဲ အိမ်မှာ အုန်းသီး ချိတ်တာ နှစ်ရှည်လများကြာလာပြီ။ နောက်ပိုင်း မိသားစုဝင်တွေ ဘာသာရေး အသိနဲ့ ပိုလုပ်တာတော့.. အိမ်က အုန်းသီး မနေနိုင် ဖြစ်တယ်နဲ့ တူတယ်.. အုန်းသီးကိုတော့ ဘယ်သူမှ မဟုတ်မမှန်တဲ့ စိတ်မထားပါဘူး။ သူဟာသူနေ.. ကိုယ်ဟာကိုနေ.. အိမ်မှာ ချထားတဲ့ အထုတ်တထုတ် မြင်ပါများတော့ ရိုးနေသလိုတောင် ဖြစ်နေပြီ။ နောက်ဆုံး အိမ်မှာ တင်တဲ့ အုန်းသီးက တော်တော် အလုံးလှတယ် စိမ်းနေပြီးတော့.. အလုံးက ၀ိုင်းဝိုင်းလေး.. ထုံစံအတိုင်း နံသာဖြူလေး လူးပေးပြီး ချိတ်ပေးထားတာ.. နောက် ၁ပတ်လောက် ကြာတော့ အုန်းသီး အောက်မှာ ရေကွက်နေတယ်။ တနေ့သုတ်လိုက်.. နောက်တနေ့ သုတ်လိုက်နဲ့.. ပထမတော့ ပန်းအိုး ရေဖိတ်တယ် ထင်မိတယ်။ နောက်နေ့တွေ ဘာမှ မတိုက်မိဘဲ.. အုန်းသီး အောက် တည့်တည့်မှာ ရေအကွက်ကလေး ဖြစ်နေတော့.. အုန်းသီးက ကျတာ ဖြစ်မယ် သတိထားမိပေမဲ့ အုန်းသီး မှာ အပေါက် အကွဲ ရှာမတွေ့ဘူး.. ၁ပတ်လောက်နေမှ.. အုန်းသီး အညှာကလေး ကြွလာတယ်။ အဲဒီ အောက်မှာမှ.. အကွဲလေး သေးသေးလေး မြင်ရတယ်။ ဆူး ကတော့ အိမ်က အုန်းသီး ဖျြုတ်သာပစ်လိုက် ဘာမှ မဖြစ်ဘူး ဆိုပြီး ပြောလိုက်တယ်။ အမေကတော့ နဲနဲ စိတ်ရှင်းအောင် ဘုန်းကြီးသွားမေးမယ်တဲ့.. ဆရာတော် ပြောတာကတော့.. ရေလျှံတော့ ကောင်းတာပေါ့.. အုန်းသီးလည်း အိမ်မှ ထားမနေနဲ့ ရတယ်.. နေစရာ မရှိရင် ကျောင်းလွတ်လိုက်.. ရီပြီး ပြောတာနဲ့ .. အုန်းသီးလည်း အဆက်ပြတ်သွားတယ်။
အုန်းသီး ကျွှမ်းကျင်သူတွေ မေးကြည့်တာတော့ အုန်းသီး က အဲလို အရည်လျှံထွက်တာ ဖြစ်ခဲ သလို ဖြစ်တယ်လို့တောင် မကြားဘူးဘူးလို့ ပြောကြတယ်။ နောက်ပြီး အုန်းသီး ဖြုတ်လိုက်တဲ့ အချိန်အထိ အရည် ရှိသေးတယ်။ အုန်းသီး အရည်လျှံကျတာ ၁ပတ် နီးပါး ၅ရက်လောက် ကို လုံးဝ ကွဲကြောင်း မမြင်ရဘဲ.. ကျပြီးမှ.. ၅ရက်နောက်ပိုင်း အညှာကြွာလာပြီး ၇ရက်လောက်မှာ အကွဲရာလေး မြင်ရတာ။ ကြုံဘူးသူ ရှိရင် ပြောပါအုန်း။
အုန်းသီးများ နတ်တင်ရင် အညှာ ကြွက်မြီး မကျိုးစေနဲ့ ဆိုတာ ပါသေးတယ်.. လူတွေက အကြောက် တရားတွေ စိုးမိုးနေကြတာ လွန်ပါရော။
အုန်းသီးကိုတော့ အလွန်ကြိုက်သဗျ… ထန်းလျက်လေးနဲ့စားရင် အရမ်းကောင်း..
ငပလီရောက်တုန်းကများ.. တန်လိုက်တဲ့အုန်းသီး.. တစ်လုံး ၂၀၀ ပဲရှိတယ်.. (ဒါတောင်ဈေးများတယ်တဲ့.. တစ်ချို့နေရာတွေမှာ.. ၁၅၀ ပဲရှိတယ်တဲ့) တစ်နေ့ ၃ လုံး ၄လုံးစားတာ.. တော်သေးတာပေါ့.. ရေနိုင်အောင်ချိုးနိုင်လို့.. နို့မဟုတ်ရင် ကန်လိုက်မယ့်အပူတွေ…..
အခုလဲ အိမ်မှာ ဘာနတ်အုန်းမှ မထားတော့ဘူး
လေးပေါက် အသက်ကြီးလို့ မစားရတာပေါ့။ သွေးတိုးလို့နေမှာပေါ့.. မန်းဆိုမှတော့.. ရာသီဥတုက ပူတယ်.. သွေးကတက် နေကပူ ခေါင်းပွင့်ထွက်သွားမယ်။ လူငယ် အတွက်ဘဲ ကောင်းတယ်လေ.. လူကြီး တွေ အတွက်ကတော့ တန်ဆေး လွန်ဘေးပေါ့။
ဆရာကြီးသော်တာဆွေကတော့ .. သူများအိမ်ကနတ်ကပ်ထားတဲ့ အုန်းသီး ဘောလုံးအမှတ်နဲ့ဖြုတ်ပြီးကန်လိုက်တာ… နတ်ကိုင်ခံရတယ်..။
ဆူးပြောသလိုအုန်းသီးအရည်လျှံတာ တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးဘူး။ ထူးဆန်ူးတယ်နော်၊ အုန်းဆီအနည်းငယ်ကို သွားဖုံးနှင့် သွားတို့တွင် အမြဲတမ်း ပွတ်တိုက်ပေးပါက သွားများကို ပိုမိုခိုင်မာစေနိုင်ပါတယ် ဆိုတာ တကယ်လား၊ ဒါဆိုသွားတိုက်ဆေးမသုံးတော့ဘူးနော် ok လား?
ဆူးဆရာမ ( မြန်မာဗိန္ဓော အထူးရမ်းကု ) ကို သိလိုသမျှ မေးနိုင်ပါတယ်။
အုန်းဆီကို ပါးစပ်ထဲပွတ်ရင် သွားများကို ခိုင်မာစေသော်လည်း
ခံတွင်းနံ့ကို ပျောက်စေမည် မဟုတ်ပါ။ သို့ဖြစ်ပါ၍ သွားတိုက်ဆေးမသုံးလိုက မသုံးပါနှင့်။
သို့သော် လူကြားထဲတော့ ပါးစပ်ပိတ်ထားပါ။